တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် COVID ကြောင့်သေဆုံးသွားသူတဦးကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသယ်ဆောင်နေ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ် စစ်တမ်းအရ ကြာသပတေးနေ့မှာ ကမ္ဘာတလွှား ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရသူ သန်းပေါင်း ၁၀၄ သန်းကျော် ရှိပြီး သေဆုံးရသူက ၂ သန်း ၃ သိန်းနီးပါး ရှိပါပြီ။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ကူးစက်သူ ၂၆ သန်းကျော်နဲ့ အများဆုံးဖြစ်နေပြီး သေဆုံးရသူက ၄ သိန်းခွဲကျော် ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယက ကူးစက်သူ ၁၀ သန်းကျော်နဲ့ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးလ်က ကူးစက်သူ ၉ သန်းကျော်နဲ့ တတိယအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရ ပြည်တွင်းမှာကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၃,၁၀၀ ကျော်နဲ့ ကူးစက်သူ ၁၄၀,၉၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။
ဥရောပဒေသတလွှား ဒီရောဂါကူးစက်မှု တိုးနေပြီး ဒီကပ်ရောဂါရဲ့ အန္တရာယ် ကြီးမားဆဲ ဖြစ်နေပေမယ့် တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ lockdown ချကန့်သတ်မှုတွေ နောက်ထပ် ထပ်လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ် မထင်ဘူးလို့ ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ် Jean Castex က ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဒါပမယ့် ဒီရောဂါ ကူးစက်မှုမရှိအောင် လိုအပ်တဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အားလုံးကို လုပ်ကြဖို့တော့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတွင်း ဒီရောဂါဆိုင်ရာ အခြေနေ ခုထက်ပိုပြီး သိပ်ဆိုးလာရင်တော့ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေ ထပ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ကာကွယ်ဆေး အလုံးပေါင်း ၁. ၇ သန်းကို မတ်လကုန်အပြီးထိုးပေးဖို့ သောကြာနေ့မှာ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာတလှား ကိုဗဈ နောကျဆုံး အခွအေနေ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှု ဆိုငျရာ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာနတေဲ့ Johns Hopkins တက်ကသိုလျ စဈတမျးအရ ကွာသပတေးနမှေ့ာ ကမ်ဘာတလှား ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရသူ သနျးပေါငျး ၁၀၄ သနျးကြျော ရှိပွီး သဆေုံးရသူက ၂ သနျး ၃ သိနျးနီးပါး ရှိပါပွီ။
အမရေိကနျနိုငျငံက ကူးစကျသူ ၂၆ သနျးကြျောနဲ့ အမြားဆုံးဖွဈနပွေီး သဆေုံးရသူက ၄ သိနျးခှဲကြျော ရှိပါတယျ။ အိန်ဒိယက ကူးစကျသူ ၁၀ သနျးကြျောနဲ့ ဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈပွီး ဘရာဇီးလျက ကူးစကျသူ ၉ သနျးကြျောနဲ့ တတိယအမြားဆုံး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနရဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၃ရကျနအေ့ထိ ထုတျပွနျထားတဲ့စာရငျးအရ ပွညျတှငျးမှာကပျရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၃,၁၀၀ ကြျောနဲ့ ကူးစကျသူ ၁၄၀,၉၀၀ ကြျောရှိနပေါတယျ။
ဥရောပဒသေတလှား ဒီရောဂါကူးစကျမှု တိုးနပွေီး ဒီကပျရောဂါရဲ့ အန်တရာယျ ကွီးမားဆဲ ဖွဈနပေမေယျ့ တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ lockdown ခကြနျ့သတျမှုတှေ နောကျထပျ ထပျလုပျဖို့တော့ လိုမယျ မထငျဘူးလို့ ပွငျသဈဝနျကွီးခြုပျ Jean Castex က ကွာသပတေးနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။ ဒါပမယျ့ ဒီရောဂါ ကူးစကျမှုမရှိအောငျ လိုအပျတဲ့ ကွိုတငျကာကှယျမှု အားလုံးကို လုပျကွဖို့တော့ တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ နိုငျငံတှငျး ဒီရောဂါဆိုငျရာ အခွနေေ ခုထကျပိုပွီး သိပျဆိုးလာရငျတော့ ကနျ့သတျပိတျပငျမှုတှေ ထပျလုပျရမှာ ဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ ကာကှယျဆေး အလုံးပေါငျး ၁. ၇ သနျးကို မတျလကုနျအပွီးထိုးပေးဖို့ သောကွာနမှေ့ာ စတငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။